प्रचण्डले बोलाएको अनौपचारिक सचिवालय बैठकमा को आए, को आएनन् ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more प्रचण्डले बोलाएको अनौपचारिक सचिवालय बैठकमा को आए, को आएनन् !
प्रचण्डले बोलाएको अनौपचारिक सचिवालय बैठकमा को आए, को आएनन् !
कात्तिक २१ गते, २०७७ - १५:५०
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का बहुमत सचिवालय सदस्यको बैठक केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा सुरु भएको छ। कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले अनौचारिक सचिवालय बैठक दिउँसो ३ बजेका लागि पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बोलाएका हुन्।
पार्टीको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रचण्डले बोलाएको बैठकमा सचिवालयका ९ जना सदस्यमध्ये ५ जना उपस्थित भएका छन्। बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता माधव कुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ उपस्थित भएका छन्।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री एवं सचिवलाय सदस्य ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र महासचिव विष्णु पौडेल भने सहभागी छैनन्। रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेल भने गृह मन्त्रालयमा छलफलमा रहेका बताइएको छ। पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अनौपचारिक बैठकका लागि सचिवालयका ९ जनालाई नै बैठकमा बोलाइएको बताएका थिए।
पार्टीभित्र उत्पन्न संकट समाधानका लागि अध्यक्ष प्रचण्डले अरू नेतासँग छलफल गर्न बैठक बोलाएका हुन्। पार्टी कार्यालयमा हुने छलफलका आधारमा के गर्ने भन्ने निर्क्योल हुने एक सचिवालय सदस्यले जानकारी दिए। बिहीबार अध्यक्ष केपी शर्माओली र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा कुराकानी भएपनि सहमति जुट्न सकेको थिएन। गत शनिबार ओली र प्रचण्डबीच भएको सम्वादमा ओलीले बैठक बोलाउन अनिच्छा देखाएका थिए।
कात्तिक २१ गते, २०७७ - १५:५० मा प्रकाशित